Huawei ဖုန်းတွေမှာ c8500 နဲ့ c8600 တွေမှာ Version 2.1 ကနေပြီးတော့ 2.2 ကို ပြောင်းရန် - MYSTERY ZILLION
Huawei ဖုန်းတွေမှာ c8500 နဲ့ c8600 တွေမှာ Version 2.1 ကနေပြီးတော့ 2.2 ကို ပြောင်းရန်
Huawei ဖုန်းတွေမှာ c8500 နဲ့ c8600 တွေမှာ Version 2.1 ကနေပြီးတော့ 2.2 ကို ပြောင်းလို့ရပါသလား ခင်ဗျာ ။
ko moe moe
bcodblack wrote: »
A) Install the recovery
(1) First make sure your computer to install the phone drivers, you can brush the normal mode of use fastboot and update.zip Brush Pack files in the SD card root directory.
(2). C8500_Recovery.rar archive will extract toadirectory on your computer.
(3). The phone and the computer is disconnected and shut down.
(4). Press the red hang up button + volume down key + power key to power, will stop after the first boot screen, then enter into fastboot mode.
(5). The phone connected to the computer
(6). Run unzip directory install-recovery-windows, start writing to recovery-clockwork-pulsemini-v1.8.1.4, then the phone will automatically restart.
(7). At this time disconnect the battery cable and the forced shutdown, and then reloading the battery. Write to complete the recovery at this time. They do not brush any other recovery, since you can directly use this recovery restore.
(B) of the brush ROM methods:
0. In the off state, press the green dial button + volume up button + power button to boot into the recovery after the other:
1. Select "Wipe".
2. Select "Wipe data / factory reset" and press the OK button to confirm the operation
3. Select "Wipe Dalvik-cache" and press the OK button to confirm the action.
4. Press volume down key to return to the main menu, select "apply sdcard: update.zip".
5. Patiently waiting for the progress bar finish bottom of the screen appears "Install from sdcard complete." And choose "Reboot system now" to complete the flashing process.
The brush card for the use of the general process of recovery is equally applicable to other zip format Brush Pack.
Also, to draw attention to that, IOZ9 Master Brush Pack provides the name of the "C8500.2.2.1_ioz9.zip", I suggest, or be renamed "update.zip" (see below) (I this is done, use the "C8500.2.2.1_ioz9.zip" This file name does not know "recovery" is not to be identified) on the SD card root directory, that is "SD Card \_ update.zip" Baidu search below :
C8500_Recovery1.8.1.4 full version. Zip
CHINA page is
myatminpai wrote: »
ko moe moe wrote: »
C8500.ioz9.2.2.1.zip လေးကို mediafire ပေါ် တင်ပေးလို့ ရမလား။ ကျေးဇူးတင်လျက်......
အပေါ်က လင့် အတိုင်းလုပ်တာ စမ်းဖူးတဲ့အကိုများ ရှိလားဗျ။
root လုပ်တာရော မြန်မာFont ထည့်ရရော အိုကေလားဗျ။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ကျနော် နဲ့ ကျနော် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အတူတူ update လုပ်တာ ကျနော် 8600 ကရတယ်ဗျ။
ကျနော် သူငယ်ချင်း 8600 တော့ update လုပ်ရင် update fail ဖြစ်ပြီးပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်။
မြန်မာ Font ရော အိုကေတယ်ဗျ။
နှစ်ခုပါဘဲဗျ... 3ဂျီ ခလုတ်တော့ မပါတော့ဘူး။setting ထဲ ၀င်အမှန်ခြစ်ရတယ်။
ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လိုင်း connection ရဲ့ အပေါ်မှာ 3ဂျီ ဆိုတဲ့ connection တိုင်းတော့ မတွေ့တော့ဘူးဗျ။
ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပါ...အပြင်မှာတော့ 25,000 ခွဲတဲ့ဗျာ...
sdcard ထဲ ကြိုက်သလောက်ထည့်တော့ဗျာ...အဲဒီအတွက် တော့တော့လေးတော့ ဖုန်းက ပေါ့သွားတယ်ဗျာ။
C8500 HUAWEI Phone များ version -2.1 မှ 2.2 ကိုပြောင်းမည် ့သူများ သတိထားပါ
ကိုယ်တွေ ့ပါ ကျွန်တော့်c8500 လေး ဂျာနယ်တခုမှာပါလို့version သွားမြှင့်တာ မြှင့်လဲပြီးရော
phone ကိုပြန်စမ်းတော့ camera ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး (can't connect the camera)
ဆိုပြီး error ကျလာရော အဲဒီတော့ဆိုင်ကိုပြောတာ ဒီမှာခုလေးတင် c8500 တစ်လုံး version မြှင့်ပြီးတာတဲ့ကျတော့ကိုပြတယ်
ဟုတ်တယ်သူပြတဲ့အလုံးက camera ကကောင်းနေရော သူက software version မြှင့်တာ
camera နဲ ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ မင်း camera က နဂိုထဲကပျက်နေတာတဲ့ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်က
phone ၀ယ်တာမကြာသေးတော့ ဆိုင်ကိုသွားပြန်လဲတာ ဆိုင်က အသစ်နဲ ့ပြန်လဲပေးလိုက်တယ်
ထပ်ပြီးတော့အဲဒီဆိုင်ကို version သွားပြန်မြှင့်တယ် version လဲမြှင့်ပြီးရော camera error ကျလာရော
အဲဒီကျမှငါလဲခုမှသိတာတဲ့ ဆိုင်ကိုပဲတစ်လုံးသွားပြန်လဲလိုက်ပါတဲ့ဗျာ သူတို ့ကတာ၀န်မယူဘူးတဲ့
နဂိုထဲကသူတို ့သေချာစမ်းပြီးမှကြေငြာသင့်တာပေါ့ တော်သေးတယ် ဆိုင်က အသစ်တလုံးပြန်လဲပေးတယ်
နောက်တခါကျရင်လဲမပေးတော့ဘူးတဲ့ အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် version ကိုမမြှင့်ရဲတော့ဘူး
အဲဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ သိတဲ့သူများ ပြန် share ပေးကြပါ
ခုကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ Touch Mobile နဲ့Lulay Mobile က c8500 တွေမှာအဲလိုဖြစ်တာပဲ
Mediafire link ပါ
zawhtun wrote: »
ကျနော် ကိုယ်တွေ့ကတော့ ကျနော် သူငယ်ချင်း 8600 လုံး၀မရဘူးဗျ။
ကျနော် 8600 မှာတော့ contact ပိုင်းမှာတော့ လေးတယ်ဗျ။
ကို version သွားမြှင့် တဲ့ ဆိုင် နာမည်က Today's Mobile လားမသိဘူး.. ကျွန်တော်လဲ မနေ့ ကမှာ အဲဒီဆိုင်မှာသွား၀ယ်ပါတယ် ... c8500 ကို 115000 ပေးရပါတယ် ( Do Co Mo မှာ 109000 ပဲရှိပါတယ် ).. ပြီးတော့ version မြှင့် ပေး ပါတယ်.. အဲဒီထိအကောင်း... ဖုန်းကဖန်ရှင်တွေ ဘာတွေ စစ်ပြီးပါတယ်.. camer တော့မစစ်မီလိုက် ဘူး... version မမြှင့် ခင်က အကောင်ဆိုတော့ မစစ်လိုက်ပါဘူး..ပိုက်ဆံတော့ ဘာတွေ ရှင်းပြီတော့.. အိမ်က ပြန်ပြီ . အိမ် ရောက် မှာ ထက် စမ်းတာပေ့ါ.. အဲဒီမှာ camer error တက်မှန်းသိပြီ ချက်ချင်းဖုန်းဆိုင်ကိုပြန်သွားပြောတာပေါ့... အဲ ဒီမှ စတာပဲ.. သူဒို့့ပြော တာ က version မြှင့်ပေးလို့ ဖြစ်တာတဲ့.. အဲ ဒီတေ့ာသူဒို့့က မပြောတယ် အသစ်တစ်လုံး ပြန်ယူသွား တဲ့.. version တော့ မမြှင့်ပေးတော့ ဘုူးတဲ့...ကျွန်တော်က version မြှင့်တာပဲ သုံး ချင်တာ လို့့လဲပြောပါတယ် ...တကယ်ဆို ရိုးရိုး 2.1 ့ကို သုံးချင် မှတော့ Do Co Mo မှာ ပဲ ၀ယ်မှာပေါ့ ..စျေးကသိနေတာပဲ လေ.. အကိုဆိုင် က version မြှင့်ပေးတယ် ဆို လို့ ၀ယ်တာလို့့လဲ ပြောလိုက် ကော်.. ချက်ခြင်းကြီး ပိုက် ဆံပြန် သွား လိုက်တဲ့.. ကြည့် ရောင်းသူက၀ယ်သူကို အဲ ဒီလို ပြော တယ်.. ကျွန်တော်လဲ တော် တော် တင်း သွားတယ်...နောက် ဖုန်းအသစ်ကိုပဲ ဘာ software မှာ မထည့် ပဲ ယူလာလိုက်တယ်.. ကျွန် တော်ပြောချင်တာ တကယ် ဆို error ရှိရင် မလုပ် ပေး နဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကြိူု ပြော ပေါ့ .. ဟုတ် ဘူးလား.. အဲ ဒါ ကို နားလည် ပါးရိုက်လုပ် တာ...ပြီးတော့ကြေငြာတောင်လုပ်သေးတယ်.. version မြှင့် ရင် 15000 ပါတဲ့... NetGuid မှာပါပါတယ်
နောက်ဆိုမှတ်ထား ပေါ့ ဆိုင် နာမည် ကို Today's Mobile တဲ့.. ကျွန်တော်တော့ နောက်ဆို အဲ ဆိုင် ကို ရှောင်ပြီ
လင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ဒေါင်းလိုက်တော့ C860020V100R001C92B703(Froyo202.2).zip ကျလာတယ်ဗျ။ c8500 အတွက်တော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်။
Bro, only Camera error?
MAY BE New Camera app in 2.2 is not fully [FONT="]compatible[/FONT] with hardware.
If u also assume like this, try this if you wish...
Here is the Original Camera Application which is pre-installed in C8500 version 2.1.
Replace this app to Camera app in 2.2 ( System>App) with Root Explorer.
Before replacement, backup 2.2's original camera app.
<This is my assumption, cannot guarantee is this the right solution. Just an advice.>
please help ,i've already tried for 8500,8600 with particular update files.but on my phones its show update <br>failed on step 2/2 .why ?.please tell me coz truely i need.<br>
April 2011 edited May 2011 Registered Users
မေးခွန်းပေါင်းချုပ်ဖြေရှင်းပေးကြည့်မယ်ဗျာ။ မှန်သည်ရှိစေ၊ မှားသည်ရှိစေ။ ခွင့်လွှတ်ပါ။<br><br>- sd card နဲ့ update လုပ်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးက memory card အလွတ်ဖြစ်နေရမယ်။ ဆိုလိုတာက ကတ်ထဲရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ခဏလောက် ကွန်ပျူတာထဲ သိမ်းပြီးတော့.. ကတ်ကို format ချလိုက်၊ ပြီးရင် update လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ dload ဖိုဒါကိုပဲ မန်မိုရီကတ်ထဲမှာ ရှိနေပါစေ။ တခြားဖိုင်တွေ (hidden ဖြစ်နေတာကအစ) မရှိနေရင် အောင်မြင်မှုနဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ် ။<br><br>- Huawei C8500, C8600 တွေအတွက် 2.1 က stable အဖြစ်ဆုံးပါပဲ ။ လောလောဆယ်ထိ official ထုတ်ပေးတဲ့ rom က 2.2 မှာတင် အဆုံးသတ်တာပါ ။ အဲ့ဒီတော့ သူ့ထပ် ဗားရှင်းအသစ်တွေ ထွက်နေတယ်ဆိုတာကို ဇွတ်ရောတင်းရော မတင်ချင်ပါနဲ့။ အဲ့ဒါတွေ အများစုက custom rom တွေပါ။ custom rom ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်က အဲ့ဒီ rom ကို ထုတ်ပေးတဲ့သူ အနေနဲ့ သူသင့်တော်မယ့်၊ အသုံးတည့်မယ့် file တွေ၊ app တွေကိုပဲ ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီတော့ သူတို့ တရုတ်ပြည်မှာ အသုံးတည့်တဲ့ ဆော့ဝဲတွေပဲ ပါပြီး.. ဒီမှာ တကယ် သုံးရမယ့် ဖန်ရှင်တွေက ပါချင်မှ ပါပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက <a href="http://ioz9.blog.163.com">ioz9</a>; ထုတ်ပေးတဲ့ rom တွေဆိုရင် ဗားရှင်း အမြင့်တွေကို အခြေခံပြီး ထုတ်တာဆိုတော့ ဗားရှင်းအမြင့်မှာပါတဲ့ ဖန်ရှင်တွေ ဘာတွေပါမယ်။ ဒါပေမယ့်.. ဒီမှာ တကယ်သုံးရမယ့် 3G တွေ ဘာတွေက ပျောက်နေရော။ အဲ့လိုမျိုးပေါ့ ။ တကယ်လို့ ခင်များက ဒီဖန်ရှင်တွေမသုံးဘူး၊ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှာလဲ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ custom rom တွေ တင်ပေါ့ ။ ဒါကတော့ ကိုယ့်အကြိုက် သူ့အကြိုက်ပါပဲ ။ <br><br>- နောက်တစ်ချက် ကင်မရာသုံးမရခြင်းပြဿနာကလဲ.. အဓိကတော့ သူတို့တင်ပေးတဲ့ rom က camera driver အဆင်မပြေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒီ C8500 တွေ 8600 တွေဆိုတာ.. အပြင်ပိုင်း ပုံသဏ္ဍန်ကသာ တူတာ။ ဒါပေမယ့် အတွင်းပိုင်း အသုံးပြုတဲ့ hardware တွေက သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ ခြားနားတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ.. ကျတော်တို့ တရုတ်ဖုန်းတွေ၊ တရုတ် mp4 တွေကို ဆော့ဝဲတင်ပေးတဲ့အခါမျိုးပေါ့၊ နိုကီယာ brand တွေလို model ကြည့် ဗားရှင်းကြည့်ပြီး ဘလိုင်းကြီး box တွေနဲ့ join ပြီး ရေးပေးလို့မရဘူး။ သူတို့ (တရုတ်ဖုန်း) တွေရဲ့ display မော်ဒယ်တွေ၊ flash chip မော်ဒယ်တွေကို ကြည့်ရတယ်၊ ပြီးမှ သူနဲ့သင့်လျော်မယ့် firmware ဖိုင်တွေကို အခပေးလို့ ဒေါင်းကြရတယ်။ ပြီးမှရေးကြည့်ပြီး အဆင်ပြေမပြေသေချာစစ်ကြည့်၊ မပြေရင်နောက်ထပ် ဖြစ်နိုင်မယ့်ဟာ ထပ်ခါထပ်ခါ ရေးကြည့်ရတယ်။<br>ဒီ c8500, c8600 တို့ဆိုတာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ သူတို့နဲ့သင့်လျော်မယ့် ဗားရှင်းတွေကို တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရအောင် စမ်းကြရတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ official ပေးထားတဲ့ rom တွေနဲ့ စမ်းတာ အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။<br><br>- ကင်မရာဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းက အထက်က ကိုThiha ပြောသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်အကြောင်းတစ်ခုက အပေါ်မှာ ကျတော်ပြောသလို driver error လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ <br><br>- version မြင့်တိုင်း ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုတော့ အားလုံး သတိထားစေချင်ပါတယ် ။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်အတွက် တကယ်အသုံးတည့်ဖို့၊ သုံးရတာ တကယ် အဆင်ပြေဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ SD ကတ်ထဲ ဆော့ဝဲသွင်းချင်တယ် ဆိုရင်လဲ Link2SD ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲနဲ့ 2.1 မှာ တင် လုပ်လို့ရပါတယ်၊ ဂျာနယ်အပြောတွေကို ကုန်ကုန်မယုံကြပါနဲ့။ ကြော်ညာတွေ့တိုင်းလဲ အဟုတ်မထင်ကြပါနဲ့ ။ <br><br>- ကျတော်တို့အနေနဲ့ကတော့.. အားလုံးအဆင်ပြေပြေ ဖြစ်အောင် ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။<br><br>စိုင်းညီဖြိုး (<font color="#3366ff">New Anycall</font> - <font color="#3366ff">ဖုန်းနှင့် ဖုန်းအပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး</font>)<br>@ ၇၈လမ်း၊ ၂၉ x ၃၀ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။ © ၀၉ - ၂၀၂၀၈၈၉။
မိုဘိုင်းဖုန်း (ဆော့ဝဲ or ဟာ့ဒ်ဝဲ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပြီဆိုရင်တော့<br>- စက်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာ ဖန်ရှင်ပိုင်း ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ စက်လာအပ်တဲ့အချိန်မှာ sim card ပါတယ်ဆိုလဲ sim card ၊ battery ပါတယ်ဆိုလဲ battery ပါတဲ့အကြောင်း စသဖြင့်.. စက်ပြင်ဘောင်ချာမှာ မှတ်ချက်ရေးပေးသင့်ပါတယ် ။<br>- စက်ပြင်ပြီးလို့ ဖောက်သည်လက်ထဲ ပြန်အပ်ပြီဆိုရင်လဲ "ကင်မရာ၊ အသံဝင် အသံထွက်၊ ဖုန်းအခေါ်အပြော" အဆင်ပြေကြောင်း စမ်းပြပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေမှာပေါ့။ စက်ပြင်တာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လဲ နဂိုလာအပ်တုံးကအတိုင်း ရှိနေကြောင်း ပြပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါက ဖုန်းပြင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အနေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ အနေအထားလေးပါ။<br><br>ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဆိုလဲ.. တစ်ခါတစ်ခါ အဲ့လို ကိုယ်အလိုမကျတာလေးတွေ တွေ့တွေ့နေရတာပဲ။ ဖြစ်သလိုလုပ်တတ်ကြတယ်။ ဘယ်သူကမှ ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့တော့မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်.. ပြောပိုင်ခွင့်က မရှိပါဘူး ... ကိုယ်တိုင်ကလဲ... ဆိုင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဖြစ်နေတော့.... :-(<br>
<br>လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လင့်ခ်ပေးပါမယ်။ <br><b>Recovery နဲ့ မန်မိုရီကတ်သုံးပြီး တင်ရတဲ့ rom</b> - http://u.115.com/file/f02ee0c3f3 မှာ Ctrl+F နှိပ်ပြီး <a href="http://13.bak.115cdn.com/pickdown/f80ebf2803599db4b44942ef0cfa8a714db8fc97/M00/5B/5F/d5NqqE11OFMAAAAABOXCr1z78i42476376/华为C8500中文USB刷机程序(App2ext版).7z?file=华为C8500中文USB刷机程序(App2ext版).7z&amp;key1=4db8e077&amp;key2=31302e31302e362e3539&quot; target="_blank">备份下载
</a>ဆိုတာကို ရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။<br><b>USB နဲ့ တင်ရတဲ့ rom</b> - http://u.115.com/file/f02ee0c3f3 မှာ Ctrl+F နှိပ်ပြီး <a href="http://13.bak.115cdn.com/pickdown/f80ebf2803599db4b44942ef0cfa8a714db8fc97/M00/5B/5F/d5NqqE11OFMAAAAABOXCr1z78i42476376/华为C8500中文USB刷机程序(App2ext版).7z?file=华为C8500中文USB刷机程序(App2ext版).7z&amp;key1=4db8e077&amp;key2=31302e31302e362e3539&quot; target="_blank">备份下载</a> ဆိုတာကို ရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။<br><br>အသေးစိတ်လုပ်နည်းကိုတော့ လိုအပ်မှ ပြောပါမယ်။ ioz9.2.2.1.zip က bugs တွေ အရမ်းများတယ်လို့ တော်တော်များများပြောကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်.. မလိုအပ်ပဲ မသုံးပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲ official rom တွေ သုံးပါ၊ root လုပ်ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တာ လုပ်လို့ရပါတယ်။ <br><br><b>Official 2.1 (25.4.2011 updated) rom download link:</b><br>http://www.huaweidevice.com/tcpsdownload/downLoadCenter?category=cn&amp;flay=software&amp;fileName=110425030823.zip&amp;attachmentName=C8500 V100R001C92B282..zip&lt;br&gt;
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span" size="2">ကျွန်တော်ကို dload folder ကို SD card မှာ ထည့်ပီး update လုပ်ပုံလေး ရှင်းပြပေးစေလိုပါသည် လုပ်ြကည့်တာ အဆင်မ​ပြ ဖြစ်နေလို့</font></span><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span" size="2">ကျွန်တော်လုပ်တာ ဖုန်းကို ပိတ်ပြီး hung up + volume up + power နှိပ်လိုက်တာ step 1/2 unpacking လုပ်ပြီး step 2/2 Installing စတော့ update fail ဆို ပေါ်လာတယ်</font></span></div><div><font class="Apple-style-span" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;">sdcard:dload\_sd_update.log </span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa" size="2"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;"><div>**** SD download log ****</div><div>Failure: AMSS°æ±¾Æ¥ÅäÊ§°Ü.</div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>dload_sd_ram_data_proc->(retry >= DLOAD_RETRY) failed!</div></span></font></div>
<br><div><br></div><div>I did it. succeed. thank.</div>
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span" size="2">ကျွန်တော်ကို dload folder ကို SD card မှာ ထည့်ပီး update လုပ်ပုံလေး ရှင်းပြပေးစေလိုပါသည် လုပ်ြကည့်တာ အဆင်မ​ပြ ဖြစ်နေလို့</font></span><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa; line-height: 22px; "><font class="Apple-style-span" size="2">ကျွန်တော်လုပ်တာ ဖုန်းကို ပိတ်ပြီး hung up + volume up + power နှိပ်လိုက်တာ step 1/2 unpacking လုပ်ပြီး step 2/2 Installing စတော့ update fail ဆို ပေါ်လာတယ်</font></span></div><div><font class="Apple-style-span" size="2" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;">sdcard:dload\_sd_update.log </span></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="2" face="'Masterpiece Uni Sans', Yunghkio, Myanmar3, WinuniInnwa"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;"><div>**** SD download log ****</div><div>Failure: AMSS°æ±¾Æ¥ÅäÊ§°Ü.</div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>Failure: operation did not succeed. </div><div>dload_sd_ram_data_proc->(retry >= DLOAD_RETRY) failed!</div></span></font></div>
<br>SD card ထဲက ဖိုင်တွေ အကုန်လုံးကို ကွန်ပျူတာထဲ အရင်သိမ်း၊ ပြီးရင် ကတ်ကို
format ချလိုက်ပါ။ ကတ်ထဲကို dload ဖိုဒါအပြင် ကျန်တာ ဘာမှမထည့်ပဲနဲ့..
update ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။ <br><i>End key (အနီရောင်ခလုတ်) + Volume Up key + Power </i><br>အဲ့ဒါမှ အဆင်မပြေရင်တော့ နောက်တစ်ခါထပ်ဒေါင်းပြီး စမ်းကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ် ။<br>
ကိုစိုင်းညီဖြိုး အကြံပေးတာ ကျေးဇူးပါ.. အဆင်တော့မပြေပါ... ကျွန်တော်လို kozawzaw ဆိုတဲ့လူလဲ ဖြစ်နေပုံဘဲ.. ဘ၀တူတွေပေါ့... :-S
huawei c8500 ကို v 2.3 ပြောင်းရန
ကိုစိုင်းညီဖြိုးရေ ကျနော် ၈၆၀၀ firmware ကို
USB နဲ့ တင်ရတဲ့ rom - http://u.115.com/file/f02ee0c3f3 မှာ Ctrl+F နှိပ်ပြီး 备份下载 ဆိုတာကို ရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်လုပ်နည်းကိုတော့ လိုအပ်မှ ပြောပါမယ်။ ioz9.2.2.1.zip က bugs တွေ အရမ်းများတယ်လို့ တော်တော်များများပြောကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်.. မလိုအပ်ပဲ မသုံးပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲ official rom တွေ သုံးပါ၊ root လုပ်ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင်တာ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ioz9.2.2.1.zip ဖိုင် နဲ့ အသုံးပြုနည်းကိုအရမ်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေးထားတဲ့လင့်ကိုဝင်သွားတော့လဲ
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် Mediafire ပေါ်တင်ပေးလို့ရမလား အကိုပေးတဲ့ link က download လုပ်ရတာ အဆင်မ​ပြဘူးဖြစ်နေလို့ပါ share လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
can't upload this file. u connect to [email protected]
huawei c8500 ကို v 2.3 ပြောင်းရန်
link က 2.1 update ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ဖိုင်ဆိုဒ်က တော့ထူးထူးခြားခြား ၂၁၄ မဂ် ရှိတာကလွဲရင် ပုံမှန်
For c8600 2.3
if u want to download android C8500 v2.3
can u down this like http://u.115.com/file/cl8xl945
everything is good for 2.2.1, it Ok 2.1 to 2.2, Also Rooting , Zawgyi Font, Connectioning to PC Internet with USB Cable, it good everything, it work well. Very Very Good.
akhu lo tin pay tar thank par tal byar . dissicult lope lot ya tar pop .
android 2.3 ka offical kaw hote lot lar ako twe ya . I ko pyaw kya par oo naw.
huawei c8500 ထဲကို E to m dictionary ထည့္ခ်င္လို့နဲနဲေျပာျပၾကပါလားခင္ဗ်ာ
i have same problem. can you fix is , pleas help me